Qualcomm Archives — Anycall Mobile
Qualcomm Tech Summit မှာ Snapdragon 875 ကိုတွေ့ရတော့မှာလား
မကြာသေးခင်က Qualcomm အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့Qualcomm Tech Summit ကို Dec 1 ရက်နေ့ကနေ2ရက်နေ့အထိကျင်းပလာတော့မယ်လို့ တရား‌၀င် ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ Qualcomm အနေနဲ့ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ Flagship…
Qualcomm ကတော့ သူတို့ရဲ့ Mid-range 700 Series အတွက် Snapdragon 750G လို့ခေါ်တဲ့ 5G Chipset အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Chipset ဟာဆိုရင် Snapdragon 768G ၊ Snapdragon…
(Unicode) စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Apple Event မှာ Apple အနေနဲ့ 5nm Process ကို ပထမဆုံးသုံးလာတဲ့ A14 Bionic Chip ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ 5nm Process…
Qualcomm Snapdragon 4-series အသစ်ကြောင့် တန်ဖိုးနည်း 5G ဖုန်း အများအပြားကိုတွေ့လာရတော့မှာလား?
(Unicode) အရင်က 5G ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေဟာ ဈေးတော်တော်လေးမြင့်ခဲ့တာကို စာဖတ်သူအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အခုမှာတော့ 5G ဖုန်းတွေကို Mid-range ဖုန်းတွေအပြင် Budget ဖုန်းတွေမှာတွေ့လာရနေပါပြီ။ ဒီလို ဈေးတန်းအမျိုးမျိုးထဲမှာ 5G ဖုန်းတွေကိုတွေ့လာရတဲ့အကြောင်းကတော့ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ 5G Chipsets…
Performance အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း Chipsets ၁၀ ခု
2020 ရဲ့နှစ်ဝက်ကျော်ကုန်သွားတာနဲ့အညီ Benchmarking Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AnTuTu ဟာဒီပထမနှစ်ဝက်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး စမတ်ဖုန်း Chipsets တွေရဲ့စာရင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီစာရင်းထဲမှာတော့ အစဉ်လာမပြတ် Qualcomm ကပဲ ထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒီစာရင်းကိုတေ့ာ AnTuTu အနေနဲ့ ဖုန်း Models…
Qualcomm ရဲ့ Flagship Chipset အသစ်ကိုတွေ့လာရတော့မှာလား??
Snapdragon 865 Plus Chipset ဟာဆိုရင် Qualcomm ကနေနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Chipset တစ်ခုဆိုတာကိုစာဖတ်သူအားလုံး သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ San Diego အချေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Qualcomm အနေနဲ့ ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာ ၂၀၂၁ Flagship ဖုန်းတွေတွေအတွက်…